Ahoana Ny Fomba Fanampian’ny ONG Libaney Iray Ireo Mpitsoa-ponenana Syriana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Marsa 2015 3:02 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, Español, Nederlands, English
Pikantsarin'ny hetsika IndieGogo ankehitriny avy amin'ny ‘Lebanese for Refugees (Libaney Hoan'ny Mpialokaloka)’
Nanomboka tamin'ny Desambra 2013 ny raharaha raha nantsoin'ny Kaominin'i Arsal, manamorona ny sisintany Avaratr'i Libanona amin'ny Syria ilay mpikatroka sady mpanoratra gazety Carol Malouf mba hanasongadina ny fahorian'ireo fianakaviana Syriana mpitsoa-ponenana manodidina ny 400. Nipetraka tao amin'ny “faritra tsy natao hoan'ny olona” izy ireo ary voalaza fa mety hamely izany faritra izany indrindra ny tafio-drivotry ny ririnina mandravarava, antsoina hoe Alexa. Ary tamin'izany no niterahan'ny Fikambanana tsy miankina ‘Libaney Hoan'ny Mpitsoa-ponenana‘.
Miasa amin'ny fomba nentim-paharazana ny Libaney Hoan'ny Mpitsoa-ponenana, manangom-bola amin'ny alalan'ny fanomezana miaraka amin'ny fiarahamiasa amin'ireo fikambanana tsy miankina maromaro sy fikambanana tahaka ny Komitin'ny Mpamonjy Voina Islamika, ny Ambasady Amerikana ao Beirut, ny Vondrona Eoropeana ary ny Foodblessed, ankoatra ny hafa.
Na dia mbola fotoana fohy aza no nitsaganan'izy ireo, efa afaka mirehareha amin'ireo zava-bita marobe ny Libaney Hoan'ny Mpitsoa-ponenana. Araka ny tatitra isan-taona alefa aty amin'ny Global Voices Online, nahavita nanangona vola 100.000 dolara Amerikana tao anatin'ny telo volana izy ireo nanomboka ny Desambra 2013 hatramin'ny Martsa 2014, ary 20.000 dolara Amerikana tamin'ny Janoary 2015 izay tafiditra ao anatin'ny fanentanana “ataovy mafana izy ireo”. Ny farany teo ohatra dia nahitana olona maherin'ny 3.000 nanolotra akanjo, kiraro, kilalao, bodofotsy, sakafo sy vola, izay nangonina tao anaty kamiao 22 mizara ireo fanomezana hoan'ireo mpitsoa-ponenana ao amin'ireo toby marobe nandritra ny iray andro ihany.
Fanentanana “Ataovy mafana izy ireo” tao Hamra tamin'ny 10 Janoary (Sary: Hummus For Thought)
Ankoatra izany, tamin'ny herinandro voalohany, nizara menaka gazoaly hoan'ny fianakaviana 50 izy ireo (40 litatra isam-pianakaviana sy isan-kerinandro) miaraka amin'ny vola 5000 dolara amerikana laniana isan-kerinandro amin'ny solika sy etona fahandroana sakafo amin'ireo herinandron'ny ririnina ambin'ny 2013-2014. Nizara kitapon-tsakafo maherin'ny 1.000 izy ireo ary tany itobiana mirefy 2.000 metatra norakofana vatokely. Ankoatra izany, nandany 30.000 dolara Amerikana amin'ny fanampiana ara-pitsaboana izay nozaraina tamin'ireo mpitsoa-ponenana ihany koa izy ireo ary nanatontosa fizahana ara-pahasalamana niarahana tamin'ny mpitsabo avy ao amin'ny Oniversite Amerikana ao Beirut (AUB). Tranga maro nilàna fitsaboana haingana no nalefa tao amin'ny Foibe Ara-pitsaboan'ny AUB (AUBMC). Ambangovangon'ny zava-bitan'izy ireo fotsiny izany.
Mifantoka amin'ny ezaka hanangona vola 20.000 dolara Amerikana hanatontosana ny tetikasa manaraka ny ONG ankehitriny. Olana goavana amin'ny fitantanana ny toe-javatra mahazo ireo mpitsoa-ponenana ny tsy fahampian'ny famatsiam-bola. Araka ny efa notaterinay, mbola tsy ampy ny ezaky ny fiarahamonim-pirenen'ny Libanona. 60 isanjato monja (757 tapitrisa dolara Amerikana) amin'ny vola tadiavin'ny Biraon'ny Vaomiera Ambonin'ny Firenena Mikambana misahana ny mpitsoa-ponenana (UNHCR) tamin'ny 2014 (1,2 miliara dolara Amerikana) no natolotra tamin'ny Desambra 2014. Nanambara ihany koa vao haingana ny Firenena Mikambana fa notapahana ny fanampiana ara-tsakafo hoan'ireo mpitsoa-ponenana 1,7 tapitrisa, noho ny “tsy nanajana ny fanampiana ara-bola.”
Mety ho sarotra tanteraka tokoa ny fanatrehana ilay lazana hoe ‘harerahan'ny mpanome’. Hatramin'izao, efa zary fahazarana ny mahita ireo mpitsoa-ponenana Syriana ao anatin'ny toe-draharaha maharavarava fo sy ny fitomboan’ isan'ireo mpitsoa-ponenana isan'andro ary ny tsy fahitana mangirana izay mety hifaranan'ny ady, mety ho mora ny manomboka “mizatra” ny toe-javatra iainan'ireo mpitsoa-ponenana. Tamin'ny antsafa tao amin'ny France 24, niresaka momba ny fanambin'ny havizanan'ny mpanome vola i Carol Maalouf :
Misy ireo ezaka marobe fanentanana momba ny manjò ireo mpitsoa-ponenana Syriana ao Libanona. Iray tamin'ireo nasongadin'ny Libaney ho an'ny Mpitsoa-ponenana ny “The Match Girl” [Ny Zazavavy Sahaza?], sarimihetsika fohy Danoà mitantara ny angano malaza amin'ny mitovy anarana amin'i Hans Christian Andersen. Nalaina tao amin'ny toerana ao Beqaa ao Libanona ny horonantsary, izay mpitsoa-ponenana maherin'ny 400.000 no monina ao ankehitriny. Araka ny filazan'ny tale Thomas Pa Papetros sy Darin “Daro Daro” Hassan, nosafidiana manokana ity angano ity mba “hampiseho fa tsy dia nisy zavatra niova firy tao anatin'izay 170 taona izay.” Tetikasan'ny Turning Tables vatsian'ny Red Barnet/Save the Children Denmark ary tohanan'ny Kong Gulerod Film ity horonantsary ity.
Raha te handray anjara amin'ny fanangonam-bola antserasera ataon'izy ireo ankehitriny ianao, afaka manao izany ao amin'ity rohy ity.